Gabadha Ilhaan Cumar oo Farriin culus u dirtay Trump - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Getty Images/KEREM YUCEL
Gabadha ay dhashay Ilhaan Cumar ee lagu magacaabo Isra Xirsi ayaa sheegtay in ay codkeeda u dhiiban doonto sidii Trump xafiiska looga saari lahaa haddii maamulkiisa uusan qaadin tallaabo xal u ah "dhibaatada wayn" ee isbedelka cimilada adduunka.
Waxay ka mid tahay da'yar hoggaamineysay dibadbaxa isbedelka cimilada caalamka kaas oo ka dhacay Minneapolis, iyo sidoo kale daafaha caalamka, Jimcihii la soo dhaafay.
Isra oo ayaa wax laga weydiiyay farriintan arrintan cimilada la xiirta ee ay u direyso Donald Trump ayaa sheegtay "in aysan dib uga istaageyn wax qabad la'aan".
"Madaxweyne Trump, ficilladaada waxay hubaashii dhibaateynayaa dadka. Malaayiin qof oo ku nool dalkan ayey saameeyeen (ficilladaada)," ayey tiri.
"Da'yar ahaan, dadka dib ugama istaagayaan in waxqabad la'aantan ay sii socoto".
Isra waa madaxa fulinta da'yarta dibadbaxa ee isbedelka cimilada adduunka, waxayna wax ka aasaastay ururkaas.
Juwariya Jaamac oo ka mid ahayd hoggaamiyayaasha dibadbaxa isbedelka cimilada ee Mareykanka oo barnaamijka kala qeybgashay Isra waxa ay sheegtay: "Waxaan u baahan nahay madaxweynaha inuu darteen wax u qabto iyo dadka ay saameysay."
Isra Xirsi ayaa tiri: "Waan sii wadi doonnaa in aan jidadka ku sugnaano illaa wax uun oo isbedel ah laga helayo xafiiskaaga (Trump). Waxaan u codeyn doonnaa in aad guuldareysato sababtoo ah waxaan u baahannahay hoggaamiye wax ka qabto dhibaatadan aan caadiga ahayn."
Image caption Isu soo baxyada isbedelka cimilada adduunka . Sawirkan waxaa laga qaaday Thailand
Greta ayaa ka hadashay isbadelka ku yimid cimilada adduunka iyo sida hogaamiyeyaasha siyaasadda aany uga go'neyn in wax laga qabto.
"Waxaad xaddeen riyadeydi iyo ciyaalnimadeydi, waxaadna u adeegsateen ballaamo aan ficil lahayn", ayay ka sheegtay shirka.
"Waxaan mareynaa bilawga burburka, waxa keliya ee aad ka hadleysaan na waa lacag", ayay tiri Greta.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa u muuqday mid ku jesjeesay gabadha oo waxaa uu sii baahiyay muuqaal laga duubay khudbadii ay jeedisay, wuxuuna ku qoray "waxay u muuqatay gabadh faraxsan oo ka dhowrsugeysa mustaqbal ifaya oo wanaagsan!".